Myanma News » ခရီးဒဂျောင်းထဲ အတူမသွားရ Security First	13
လေယဉ်တစီးထဲ (အဲဒီလေယဉ်ကလည်း မြန်မာ့လေဂျောင်းပိုင်လေယဉ်) သမတနဲ့ ဒေါ်စု အတူစီးခြင်းပါ။ လုံခြုံရေးစည်း အတိအလင်း ကျိုးပေါက်ပါတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီပဲ ညံ့လေသလား၊ သမတရုံးပဲ ရှော်လေသလား…. ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ အဲလို မလုပ်ဘူး။ နံပါတ်၁ နဲ့ ၂ ဘယ်တော့မှာ ခရီးအတူ မထွက်ကောင်းဘူး၊ အခမ်းအနား တက်ရင်တောင် သိပ်သတိထားရတယ်။ ယူအက်စ်၊ ယူကေ တို့မှာ အတိုက်အခံပါတီကို ရှဲဒိုးအစိုးရ ဖွဲ့ပေးထားရတယ်။ မပြောကောင်း မဆိုကောင်း အစိုးရအဖွဲ့ တခုလုံး တခုခုဖြစ်ရင် တိုင်းပြည် အထိန်းအကွပ် မဲ့သွားမှာစိုးလို့။ မြန်တြံ့ပြည်မှာ အဲဒါထက် ပိုပါတယ်။ အာသာငမ်းငမ်း ချောင်းနေတဲ့ ကျားဆိုးက အဆင်သင့်… အလစ်ဝင်ညှောင့်မည် ဝံပုလွေအုပ်က သွားရည်တမြှားမြှား….။ အကယ်ရွေ့ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေဖို့ ဒီချုပ် ဘာပြင်ထားသလဲ..။ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဒုသမတ ၁ က ယာယီအုပ်ချုပ်သွားမှာနော… ရက်ပိုင်းပဲထားဦး.. အခန့်မသင့်ရင် အားလုံးရေစုန်မျောသွားလိမ့်မည်။ နောက်ပြီး သမတနဲ့အတူ ဒေါ်စု အတူခရီးသွားမည်၊ နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေးတက်မည် ဆိုထားသမို့ လေယဉ်ပျံနှစ်စင်း မတတ်နိုင်တဲ့ လူမွဲတိုင်းပြည်မှာ ဘယ်လို စီမံကြမည်နည်း။ အမှားဆိုတာ ပြစ်တင်ဖို့ထက် သင်ခန်းစာယူဖို့ဆိုရင် ဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သလဲ နောင်မဖြစ်အောင် အရေးတဂျီး ဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုနေပါပီခမြား..။ ငါကွ….
kai says: ဟိုးးးး. နဂိုကတည်းက.. ဒေါ်စုက.. နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေမှာ.. သူက..သမ္မတဘေးမှာထိုင်နေမှာပါဆိုပြီး.. ပြောထားတယ်လေ…။
ဦးကြောင်ကြီး says: လုံခြုံရေး စည်းကမ်းအရ မကျူးလွန်သင့်တဲ့ အမှားမျိုး.. အူးမာမွပ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ တစ်နဲ့နှစ် အတူမသွားဘူး။ စစ်အဆိုးဓမြခေတ်မှာလည်း အဲလို မလုပ်ဖူး။ ဒီလောက်ထိ လာဘ်လွတ်စပယ် မဖြစ်သင့်ဘူး။ နိုင်ငံတခုလုံး ကသောင်းကနင်း ဖြစ်သွားမည့်အမှား…။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: အုကြောင် မှန်ဒယ် အုကျောင် တော်ဒယ်
ခင်ခ says: သမ္မတကြည်ဘဲလည်း သွားလို့မဖြစ် ဟိုရောက်ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်းမသိဖြစ်မယ်။ ဒေါ်စု ကြည်ဘဲလည်း သွားလို့မရ ဟိုသမ္မတကိုဖိတ်တာလေ ဒါကြောင့် ဆြာကြောင်ရေ နှစ်ယောက်မမြင်ပါနဲ့ တစ်ယောက်ထဲ တစ်ထပ်တည်းဟုသာ မြင်ပါလော့။ လက်ရှိအခြေအနေက ဒီလိုဘဲတတ်နိုင်မှာကိုး။
ဦးကြောင်ကြီး says: တေမင်းက တယောက်ထဲလည်းမြင် နှစ်ယောက်စလုံးလည်း မြင်တယ်ဗျ… ဘယ်လို ဂွဇက်ရွာသားတွေလည်းမသိ… စု ဆိုတာနဲ့ နိုင်ငံရေး ပြေးကပ်တော့တာပဲ… ခုပြောတာ လုံခြုံရေး ရှုထောင့်ဗျ… ငှာလခွီး…
ခင်ခ says: လုံခြုံရေးမဟာဗျုဟာအရ ဆြာကြောင် ပြောတာကို လက်ခံပါတယ်ဗျာ။
ဂျက်စပဲရိုး says: အူးကြောင် ပြောချင်တာက အနည်းဆုံး တစ်ယောက် လေယာဉ်တစ်စီး နဲ့ သွားသင့်တယ် လို့ နေမယ်။
ခင်ဇော် says: ကြောင်ပြောတာ ထောက်ခံတယ်..
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဒါမှ ပညာရှိ ဦးကြောင်ကွ။ ဦးကြောင်ကို ရာနှုန်းပြည့်ထောက်ခံတယ်။
Thint Aye Yeik says: ”နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ လုံခြုံရေးမှူးကြီး ဦးကြောင်”
Wow says: ဒီတခါကြောင်မှန်ဒယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေးမှူ ဦးကြောင်ကြီးက ဒီလိုလည်း ဆိတ်ပူပေးတတ်သေးသကိုးးးးး
သာဒု Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: London has fallen ကိုတောင် သတိရသွားသေးတယ်… Bravo အူးကြောင်